ဒေါ်ရီရီလွင် – Community’s Naming and Shaming – Civilised Forums of Myanmar Community
Listings and ads - ...
Community's Naming ...
Mar 15, 2021 1:02 am
အကောင်နာမည်အရင်က Ma phyu ပါ အခု အကောင့်ကနာမည်ပြောင်းပီး ပုံမတင်ထားပါဘူး
ကျောက်မြောင်း သီတာလမ်းအတွင်းဝင်နေကြသော သပိတ်လူငယ်များအား ဓာတ်ပုံ Videoရိုက်ပီး သတင်းပေးနေသည့်အပြင် အထိုင်သပိတ်ဆန္ဒပြသူများကိုလဲ "အပြုံးမပျက်နဲ့ ရုံးတက်" "ငါတို့က အလုပ်နဲ့အကိုင်နဲ့"ဟု့ လှောင်ပြောင်ပြောဆိုနေသောကြောင့် လူငယ်များ သတိထားလို့ရနိုင်ရန် မနေ့က Postတင် သတိပေးခဲ့ပါသည်
သို့သော် ယနေ့တွင် သူသုံးနေတဲ့Fbအကောင့်ကိုလဲပြောင်းထားပီး
" ငါက ပြန်ကြားရေးကခရိုင်ဦးစီးမှူး နင်တို့လိုစောက်လုပ်စောက်ကိုင်မရှိပဲ လက်ယားလက်ယားလုပ်မနေနိုင်ဘူး မလုပ်ချင်လို့ကြည့်နေတာ စပလာမယားကြနဲ့" ဟု့ ရာထူး ဌာနတွေပါထည့်ပြောပီး မောက်မာရိုင်းစိုင်းစွာပြောဆိုနေသော ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည့်သူ့ဆက်စံရေးဦးစီးဌာနမှ ခရိုင်ဦးစီးမှု့ ဒေါ်ရီရီလွင်အား Social Punishmentလုပ်ကြပါရန်နှင့် လက်ရှိအလုပ် ရာထူးနှင့် နည်းနည်းမှ မအပ်စပ်သော အပြု့အမူများကြောင့် ရာထူးမှထုတ်ပယ်ပေးပါရန်
Photo to denounce
Main reason to denounce
သပိတ်လူငယ်များအား ဓာတ်ပုံ Video ရိုက်ပီး သတင်းပေး
ကျောက်မြောင်း.သီတာလမ်း. တိုက် ၄၁.၄လွှာ(ခ)
If the information provided above is incorrect, the topic starter agreed to modify or remove this topic. (အထက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များ မှားယွင်းပါက - ဤထည့်သွင်းချက်ကို ပြင်ဆင်၊ ဖျက်ထုတ်ခြင်း ပြုလုပ်ရန် သဘောတူ လက်ခံပါသည်)
RE: အကြမ်းဖက် စစ်တပ်နှင့် ပတ်သက်သည့် နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ စာရင်း
By Ulay Gyi, 8 months ago
စစ်ကောင်စီနှင့် ပူးပေါင်းသည့် ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်း ဝန်ကြ...
By Ulay Gyi, 10 months ago
ယခု လေး တင် က ပဲ ပဲခူး ကျောက်တွင်းကုန်းတာဘေး မာဃကုမာရဓမ...
By Aung, 11 months ago
စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတစ်ဦး ဦးသိုက်စိုးရဲ့ သမီးပါ YU နဲ့ U...
By Kaung Sett, 1 year ago
ကျော်ကျော်လှိုင်ပိုင်ရှင် ( S M A R T GROUP OF COMPANIE...
By Aung, 1 year ago
ဘယ်သူမှမသိအောင် ပုန်းနေလို့ လွတ်မယ်မထင်နဲ့နော် သိန်းစိန...
By Ko Nyi, 1 year ago
ရန်ကုန်မှာ မြေပြင်ကို အနီးကပ်ကွပ်ကဲပြီး လူသတ်နေတာက ရကတ ...
မန္တလေးအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး ပြင်ပလူနာဌာန ပြန်လည်ဖွင...
အစိတ်သား ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်ထွန်းဦး (ခေါ်) စိန်ကုလား ရ...
RE: ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အောင်လင်းဒွေး
နံမည်ကြီးအောင်လင်းဒွေးသူ့သမီးနံမည်က ရွှေရည်ဖူးအောင် ။ သ...
By Ulay Gyi, 1 year ago
Latest Post: အကြမ်းဖက် စစ်တပ်နှင့် ပတ်သက်သည့် နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ စာရင်း Our newest member: rakibhasan Recent Posts Unread Posts